Ividiyo: IiBlogs kwisiNgesi esingaPhekanga | Martech Zone
NgoLwesithathu, uDisemba 19, 2007 NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 6, 2017 Douglas Karr
Enye ividiyo entle evela Ubugcisa obuqhelekileyo ifunyenwe ngebhlog ka-Ade:
Olunye ugxeko olwakhayo, nangona… le vidiyo iphose isikhephe kwitekhnoloji ngemva kubloga-izinto ezinje ngeepings, ukulandelela umkhondo kunye nokwenza ngcono ukukhangela kweinjini.
UkuBhloga yiPetroli ePhakamileyo ye-Octane yeNjini yokuKhangela
Into ividiyo engathethiyo kuyo ngamandla okubhloga ekukhawuleziseni izihloko kwiziphumo zeinjini yokukhangela. Okukhona abantu bebhala ngeposi yakho, kokukhona ufikelela kubaphulaphuli. Okukhona ufikelela kubaphulaphuli abaninzi, kokukhona kungcono ukukhangela kwinqanaba lenjini yokukhangela. Eyona nto ibhetele xa ukhangela iziphumo ze-injini, ngakumbi ukufikelela kubaphendli ngokukhangela.
UGoogle ufuna ukubeka amakhonkco athandwayo, asemgangathweni kuqala xa besalathisa amagama aphambili kunye nomxholo. Xa unayo yonke ibhlogosphere ebhala ngawe-yonyusa umxholo wakho ukuya ngaphambili kumgca. Ngandlel 'ithile, ukubhloga kukunkcenkceshela i-injini yokukhangela.
Kutheni ibhlog? Kutheni ungasebenzisi iNethiwekhi yokuNxibelelana?
Abanye abantu bayabhida amacebo kwaye bayazibuza, "Kutheni ungakheli yonke inethiwekhi, emva koko? Ukuba ukubhloga kulungile kwiziphumo zeNjini yokuKhangela-iiNethiwekhi zeNtlalo kufuneka zingakholeleki! ”
Qaphela indlela uluvo oluphambili ngayo kwibhlog, njengeeblogi ezinengqondo, kunye nabafundi babo (kwicala lasekhohlo kwetshathi). Lo ngumkhonto ojolise kuwo ojolise kwiziko elifileyo kwisihloko esikhangelwe ngumkhangeli. Iinethiwekhi zentlalo zinemibono- kwaye ezinye zineebhlog zangaphakathi (ezisebenza njengebhlog yesiqhelo), kodwa ubukhulu becala iiNethiwekhi zeNtlalo zikhona ekufumaneni njengabantu, ayisiyiyo kugxilwe kumbono othile.
Iinethiwekhi zentlalo zimnandi- ndingowabaninzi. Kodwa abanalo uxinzelelo lwezihloko kunye namagama aphambili anokuba nawo ibhlog yokukhula kweinjini yokukhangela. Iibhloko ziindlela ezikhawulezayo zokufumana umbono wakho okanye izihloko eziviweyo. Iinethiwekhi zentlalo zilungile ukudibana kunye nokufumana abantu abafana nawe.
tags: blogiiblogs ngesiNgesi esicacileyoIiVidiyo zeNtengisoyintoni ibhlog
Ngomhla wama-19 ku-Disemba 2007 ngo-9: 18 AM
@Douglas "Abanye abantu bayabhida amacebo kwaye bayazibuza, kutheni ungakhi yonke inethiwekhi, emva koko? Ukuba ukubhloga kulungile kwiziphumo zeNjini yokuKhangela-iiNethiwekhi zeNtlalo kufuneka zingakholeleki! ”
Khange ndiyilandele loo logic kwaphela. Ndivumelana nengcinga yakho yokuba iibhlog kunye nothungelwano lwentlalo banezindululo ezahlukeneyo zexabiso kwaye iinethiwekhi zentlalo azilunganga kwi-SEO yemixholo (nangona inokuba ilungele enye into engekaziwa), kodwa andikhange ndiyilandele indlela ocinga ukuba abantu bayazoba imigca phakathi kwezi zimbini. Khange ndive mntu ukhankanya into enjalo…
Ngomhla wama-19 ku-Disemba 2007 ngo-9: 47 AM
Xa sithetha nabanye abathengi malunga nezibonelelo zokubhloga, ezinye (hayi uninzi) iinkampani zityhalela emva ukuba zingathanda ukwakha inethiwekhi yoluntu. Kuba ezinye iinethiwekhi zentlalo zibandakanya ukubhloga, bacinga ukuba eli inyathelo lokunyuka.
Izicwangciso emva kwazo nganye zahlukile, kunye nabaphulaphuli kunye nesizathu sabo sokubakho.
Eyona nto iphambili kukuba iinkampani zisadidekile malunga nezi teknoloji kwaye ngokwenene abawuqondi umohluko. Ndiyathemba ukuba andibaphikisanga ngakumbi!
Ngomhla wama-19 ku-Disemba 2007 ngo-10: 02 AM
Ah, ndiyabona apho uvela khona ngoku. Ubuthetha ngala mathemba e-neophyte kunye nabaxumiUve lo mdlalo omtsha obizwa ngokuba "ngumnatha wangaphakathi" kwaye ufuna ukundenzela isiqwenga sentshukumo kuba sendikhe ndeva ukuba ungabetha isityebi apho. Utshilo njalo kumabonakude”Hayi malunga nathi abo banikele ingqalelo!
(Uxolo ukuba ndiye ngaphaya kwebhodi kulwakhiwo ... 🙂
(PS Ungayongeza njani iplagi yokujonga izimvo kule ndawo ol'blog? Ndiva kuthethwa ngeblogger ebhekise kuluhlu lweePlagi ezingama-30 eziphezulu kwenye indawo. Ndiza kubheja ukuba ungayifumana kolo luhlu… '-)
Ngomhla wama-19 ku-Disemba 2007 ngo-10: 22 AM
Nantsi enye indlela endizola ngayo umahluko phakathi kokubhengezwa kweshishini kubloga loPhando kunye neNethiwekhi yeNtlalo yeShishini.
Uninzi lwabantu abafuni ukubhalisa kwibhlog yakho yeshishini kwaye abafuni ukujoyina inethiwekhi yakho. Imibutho ecinga ukuba isicwangciso "sokwakha kwaye baya kuza" kufuneka iseke iqela kuFacebook, uya kuba namathuba aphezulu okuphumelela kunokuzama ukwenza into "Yakho" ibe yindawo ekuya kubuyela kuyo.
Xa ucinga ngeBlogging Corporate, kuya kufuneka ucinge ngenyani yokuba abantu bazokuza kube kanye… .bakhangela kwaye umsebenzi wakho kukuma phambi kwabo xa befikelela kwiphepha leziphumo.
Eli lelona xabiso liphezulu lokubhloga ngokudibeneyo
Ngomhla wama-19 ku-Disemba 2007 ngo-12: 27 PM
Nantso 'iphepha ngalinye liphepha lokufika' kwaye ndiyavuma i-100%. Nangona kunjalo, ngaphandle kwakhe nabani na ongayichazayo, awukuqinisekisi ukubekwa kwakho kwaye uya kuvumela abanye ukuba bakudlule ngokulula-ukutyhala iziphumo. Umtsalane kunye negunya zizinto ezibalulekileyo ezibonelela ngokuhlala kwamandla.